Abahlinzeki Besevisi Ye-imeyili Baye Beqa Ushaka | Martech Zone
Abahlinzeki Besevisi Ye-imeyili Baye Beqa Ushaka
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 20, 2010 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
Uma kwenzeka awukaze ufunde ukuthi yiliphi igama Gxuma uShaka kusho… kusho ukuthi sekuyisiqalo sesiphetho. Leli gama libhekisela ku-Happy Days lapho i-Fonz igxuma ushaka eqhweni lokushushuluza emanzini, ijikijela umbukiso endaweni yokufa engazange iphinde ilunge.
Uma ungumhlinzeki wesevisi ye-imeyili, ungangithethisi Okwamanje.
I-imeyili ibiwumsebenzi onzima kakhulu futhi abathumeli abakhulu kuphela abanethalente, i-hardware, kanye nezinhlelo zokusebenza zokuthumela amavolumu aphezulu e-imeyili kubahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi ezinkampanini ezinoluhlu olukhulu lwababhalisile. Ithalente seliqalile ukuzulazula embonini, i-hardware isibe yiningi (ikakhulukazi ngefu) futhi izinhlelo ziyavela kwesobunxele nangakwesokudla ukuthumela i-imeyili.
Imboni Ye-imeyili Ishintshile… Kushibhile futhi Kulula Manje
Okwenzekayo embonini wukwanda kwamancane abahlinzeki be-imeyili ziyavela. Zimnandi - zinezinhlelo ezinhle kakhulu, thumela imiyalezo enzima kakhulu, ulandelele kahle, uphathe amabhampa, izingqinamba zokulethwa, ihambisane nemithetho ye-SPAM, futhi inezindlela eziqinile kakhulu zokuhlanganisa ngokuvamile ezimahhala. Futhi bakwenza ngenxanye yezindleko zabafana abakhulu.
Nasi isibonelo: I-Newsberry ngivele ngaba ngumxhasi we Martech Zone (lokho ukudalulwa kwami). Lapho ngihlola isiza sabo ngaphambi kokuvuma isikhangiso, ngibheke ikhasi labo lamanani futhi ngamangazwa amanani:
Ngingaba nohlu lwababhalisile olufinyelela ku-100,000 futhi thumela ama-imeyili angenamkhawulo kubo ngo- $ 530 ngenyanga? Lokho kungaphezudlwana kwama- $ 6,000 ngonyaka. Ngiyakhumbula ngenkathi ngisebenza kumhlinzeki wesevisi ye-imeyili ukuthi izimali zethu zaminyaka yonke zebhizinisi elincane zazimayelana… nezimali zokuthumela imiyalezo… kanye API finyelela… plus, plus, plus…
Laba bahlinzeki be-imeyili abanamandla amakhulu bazoqhubeka nokuyikhipha futhi amabhizinisi athumela ama-imeyili azoba ngabaphumelele ekugcineni. Abaphumeleli yibo abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili abakhulu kakhulu abebekhona isikhashana - okuthile kudinga ukuguquka.
Abahlinzeki Bensiza Enkulu Ye-imeyili Bangaphezulu Kwe-Clout yabo Ekulethweni
Abanikezeli abaningi bezinsizakalo ze-imeyili bazokutshela ukuthi amavolumu e-imeyili abawathumelayo abanikeza amandla embonini futhi banamazinga angcono okuletha kanye nobudlelwano nabahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi.
Akulona iqiniso. Abahlinzeki Besevisi Encane Ye-imeyili bangenza umsebenzi omuhle kakhulu.
Umngani wami omuhle uGreg Kraios uphatha obunye bobobudlelwano phakathi kwabahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili nabahlinzeki benkonzo ye-inthanethi nenkampani yakhe, Umhume Wokulethwa. Usiza nezinkampani eziphethe ama-imeyili azo ukuthi zingene kuma-ISP! Akuthathi inkampani enkulu - kuthatha uchwepheshe omkhulu wokulethwa ngobudlelwano obuhle - futhi uGreg unabo.
Okudingwa Amakhasimende E-imeyili
Abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili kufanele baboshwe ngaphandle komthungo (futhi ngiqonde ukuthi ngaphandle komthungo) kuhlanganiswe nezinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe, amasistimu wokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende, amathuluzi wokuthuthukisa ikhasi, kanye analytics izinhlelo zokusebenza. Abathengisi bokuzenzekelayo bezentengiso bathanda I-Aprimo futhi Eloqua sezivele zihola phambili kulezi. Akwanele ukuthumela nokukala i-imeyili… izinkampani zidinga okuningi!
Ngisho nezixazululo ezincanyana ze-imeyili ezisebenza ngamanani aphansi ziyavela, nazo! Infusionsoft isisombululo esine-imeyili kanye nezixazululo zokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende ezihlanganiswe ngokuphelele.
Amakhasimende adinga ukubuyisela kabusha kalula okuqukethwe kuwo wonke ama-mediums, enze ngamandla amandla okuqukethwe endizeni, alinganise imiphumela - futhi anikezwe nempendulo yalokho okuwinile nokulahlekile. Asinaso isikhathi sokugxuma kusuka kusixazululo somthengisi kuya kusixazululo somthengisi emini… bese uzama ukubopha wonke amafayela we- analytics imibuzo ndawonye ... bese uhlaziya ukuthola amathuba. Abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili badinga ukuguqukela ezidingweni zethu.
Sekuyisikhathi sokuba abahlinzeki besevisi ye-imeyili bathathe isinyathelo, noma bazoshaywa umoya. I-Mailchimp umemezele ama-akhawunti angama-250,000 angezwe ezinyangeni eziyisi-7 esixazululweni sawo. Kodwa ngisho ne-Mailchimp yabiza kakhulu njengoba sikhulisa uhlu lwethu ngempumelelo. Sikhathele yizikweletu ezinkulu zanyanga zonke ngakho sakhe i-CircuPress – isixazululo se-imeyili esihle, esididiyelwe ngokugcwele se-WordPress esisilondolozela inqwaba futhi sisebenzise izincwadi zethu zezindaba ngokuzenzakalelayo.
Yenza-Umhlinzeki Wensiza Ye-imeyili
I-imeyili isebenze isikhathi eside, inenzuzo enkulu – kodwa isizophela. Akuthathi umzamo omkhulu ukwakha nokugcina isevisi yakho ye-imeyili kulezi zinsuku. Umngane u-Adam Small wayekhathele ukubiza amanani kanye nokuntuleka kwezindlela zokuzenzakalela, kangangokuthi usanda kuzakhela eyakhe i-AgentSauce… manje usenomakhalekhukhwini, ukuphathwa kokuqukethwe, i-Facebook, i-Twitter, kanye ne-imeyili ehlanganiswe ngokugcwele kumakhasimende akhe ngendawo yokuhlala. Uyakwazi ngisho nokuqapha ukulethwa, ukulandelela ukuvulwa nokuchofoza futhi alawule ama-bounces!
Uma ungenalo ithalente njengo-Adam, ungaya ukuyothenga i- ibhokisi kusuka kubantu abanjengo I-Strongmail, yixhume, uyivule, bese unesevisi yakho ye-imeyili eqala ukusebenza. Bazokusiza nokuthi uqalise.
Abahlinzeki Besevisi Ye-imeyili Yenzelwe Wena
Abahlinzeki abaningi be-imeyili kanye nama-ejensi empeleni bangeza ifayela le- service ephaketheni futhi. Bayabona ukuthi ukwakha ama-imeyili amahle, aphoqayo kuthatha isikhathi kanye nobuchwepheshe - futhi kunenzuzo enkulu ekutshalweni kwezimali, ngakho bathuthukisa izinhlelo zamakhasimende abo ezithengekayo futhi basuse wonke umzamo ezandleni zamaklayenti. Izibonelo ezimbalwa engizaziyo Uphawu lwendawo futhi I-Tomatofish.
Abahlinzeki Bezinsizakalo ze-imeyili Bayosinda Kanjani
Iseluleko sami kubahlinzeki besevisi ye-imeyili abakhulu laphaya ukuthola uhlelo lokuphatha okuqukethwe futhi uluthenge. Thola umhlinzeki wokuphatha ubudlelwano bekhasimende omhlanganisa eduze… bese uhlangana naye. Thola i analytics umhlinzeki, futhi uhlanganise ngaphandle komthungo. Futhi kwenze ngokukhomba okuqinile, ukuhlukanisa, nezixazululo zokuhlola. Uma ungakwenzi, othile uzofika maduze!
Tags: isetyhulaumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliespi-mailchimp
Feb 20, 2010 ngo-3: 44 PM
Lesi yindatshana enhle uDoug. Kunezixazululo eziningi kakhulu ezitholakalayo manje ukusiza ibhizinisi ukuthi liqale ukukhangiswa kwe-imeyili. Ngikholwa ngokweqiniso ukuthi ithuba lama-ESP amaningi yilokho kanye abakuchithe iminyaka begwema - futhi lokho kuyizinsizakalo. Ngenkathi kunenzuzo enkulu ukuthengisa nokuxhasa isoftware, ithengisa ngokuya iba nzima uma imakethe igcwala njengoba sekukhona. Uma ama-ESP ekwazi ukunikeza izinkampani impumelelo ebonakalayo (ngale kwesoftware, kepha athenge ukuhlela umkhankaso wamantongomane, ukuklama, nokwenza) - leyo ndlela ibaluleke kakhulu kunokuthola ithuluzi lokuthumela i-imeyili (90% ye-imeyili yokumaketha ukusebenza kwesoftware kuyafana ngempela). Hlanganisa lezo zinsizakalo namaphoyinti wokuhlanganisa aqinile onephakeji okufanele ulikhokhele.
Feb 22, 2010 ngo-10: 11 AM
Lesi ngesinye sezindatshana zami ezintsha engizithandayo, hhayi nje ngoba unikeza i-Indiemark ikhanda. 🙂
Feb 24, 2010 ngo-5: 05 PM
Imvamisa ngithanda ukudala i-imeyili ngezikhindi ezimfishane nejakhethi yesikhumba. Akupholile lokho? Indatshana enhle. Esigabeni sezinsizakalo zokwenza wena, ngithanda ukuphonsa ku-davemail (www.mydavemail.com) njengenketho. Amakhasimende ethu avame ukuyeka ukuzama ukukwenza ngokwabo. Njengobuningi babahlinzeki be-DIY online, abawabo bonke abantu. Siyabonga ngokuchaza izinketho.
Mar 19, 2010 ku-1: 47 PM
Idatha yekhasimende esezingeni eliphakeme iyisihluthulelo sempumelelo kunoma yimiphi imikhankaso yokukhangisa. Kukhona izinkampani eziningi ngokweqile ezinikezela ukumaketha kwe-imeyili ezisebenzelayo noma ezikwenzela ukumaketha okugcwele. Kepha, akekho kubo ongavela nedatha yamakhasimende ngaphandle kwakho nebhizinisi lakho.
Ibhizinisi (ikakhulukazi elisezitolo ikakhulukazi) lidinga ukuthola indlela “yokuqoqa” imininingwane yamakhasimende bese “liyibopha” libuyele emuva ekuthengeni kwabo (lokhu kulula kakhulu ezitolo eziku-inthanethi, kodwa hhayi impela ezitolo ezingokoqobo) ezinhlelweni zakho ze-POS futhi wenze leyo mininingwane itholakale epulatifomu lakho lokumaketha (i-imeyili noma i-sms noma enye into). Amandla weqiniso wokumaketha alele ekuhlaziyeni ukuthanda kwamakhasimende nangalokho angakuthandi bese ebhekisa kubo ngokunikezwa okufanele.
UJun 13, 2012 ngo-12: 56 AM
Sawubona ngiyabonga kakhulu ngokuthunyelwe okuqondayo, ngiyitholile ngephutha ibhulogi yakho ngenkathi ngisesha ku-Google ukuthola okunye ... .Ngibekisele indawo yakho isayithi..iyaqhubeka nokwabelana ..
Ngo-Apr 29, i-2013 ku-1: 29 AM
Ngibheka ukuthi ngabe kukhona yini abahlinzeki be-webmail ababelana ngenzuzo nabantu abadlulisa amagama abo wesizinda ngokusetshenziswa kweposi?